OST mankany PST Converter. niova fo OST mankany PST.
DataNumen Exchange Recovery dia ny tsara indrindra OST mankany PST mpanova ary OST fitaovana fanarenana eto amin'izao tontolo izao. Rehefa miseho ny lozisialy ao amin'ny mpizara Microsoft Exchange, toy ny lozam-pifamoivoizana, ny kolikoly amin'ny database server, sns. DataNumen Exchange Recovery afaka mampiasa teknolojia avo lenta mba hijerena ny fampirimana Exchange ivelan'ny zaza kamboty na maloto (.ost) rakitra ao amin'ny solo-sain'ny mpanjifa, avereno araka izay tratra ny mailaka sy ny zavatra hafa rehetra ao amin'ny kaontinao Exchange, ary avadiho ireo tahiry Outlook pst mba hidirana mora foana.
Fanamarihana: Ho an'ny fanamboarana sy fanarenana rakitra Outlook PST dia ampiasao azafady DataNumen Outlook Repair.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,619)
Nahoana DataNumen Exchange Recovery?
Miverena bebe kokoa noho ireo mpifaninana aminay
Ny tahan'ny fanarenana dia ny most mason-tsivana lehibe an OST fanarenana ary OST mankany amin'ny vokatra fanovana PST. Miorina amin'ny fitsapana feno nataonay, DataNumen Exchange Recovery manana ny tahan'ny fanarenana tsara indrindra, tsara lavitra noho ny mpifaninana hafa rehetra eny an-tsena!
Mianara bebe kokoa momba ny fomba DataNumen Exchange Recovery mifoka ny fifaninanana
Mahagaga ny rindrambaiko fanarenana Exchange ary miasa toy ny champ. Misaotra anao.
Enga anie 9th, 2020
DataNumen fitaovana niasa tonga lafatra, nanao ny asa nilaiko natao. A + vokatra misaotra.
Misaotra betsaka anao noho ny fahafahanao namerina ny boaty mailaka efa noheverinao lost, miaraka amin'ny DataNume Exchange Recovery
Misaotra betsaka anao noho ny fahafahanao namerina ny boaty mailaka efa noheverinao lost, miaraka amin'ny rindrambaiko DataNume Exchange Recovery.
Arahabaina DataNumen Ekipa!
Febroary 16th, 2020
Te-hiteny fotsiny aho misaotra anao nanome ity programa ity. Vao avy nampiasaiko hivadihana lehibe ity OST fisie izay mamela ahy ho sitrana
Te-hiteny fotsiny aho misaotra anao nanome ity programa ity. Vao avy nampiasaiko hivadihana lehibe ity OST fisie izay mamela ahy hamerina mailaka 150 very.
Nahavita asa tsara izy io, ary tena faly aho.
Misaotra indrindra anao. Manantena aho fa izany no izyost andro tsara, ary faran'ny herinandro miavaka !!
Enga anie 10, 2019
Raha ny marina, mankasitraka ny fanampianao izahay. Nanapa-kevitra ny hividy izahay Datanumen Exchange Recovery fitaovana omaly, ary iray amin'ireo zavatra niorenanay
Raha ny marina, mankasitraka ny fanampianao izahay. Nanapa-kevitra ny hividy izahay Datanumen Exchange Recovery fitaovana omaly, ary ny iray amin'ireo zavatra niorenanay ny fanapaha-kevitray dia ny serivisy teknika tena tsara nomenareo nandritra ny fitsapana anay.
Tena nanampy tokoa ity fitaovana ity! Nanandrana rindrambaiko hafa mitovy amin'izany aho fa ity iray ity dia mampiasa ny tetika hanarenana ireo mailaka REHETRA OST hametraka.
Enga anie 20, 2019
Te hilaza fotsiny aho fa ianareo no tsara indrindra ...
Tena ankasitrahana ianao! Azoko atao izao ny mahazo ny mombamomba ny kalandrie avy amina fananganana diso OST (tokony manana
Tena ankasitrahana ianao! Azoko atao izao ny mahazo ny mombamomba ny kalandrie avy amina fananganana diso OST (tokony ho nisy fampahalalana tetiandro nizara ho pst fa tsy tafiditra ao ost)
Misaotra indray ary mirary tontolo andro mahafinaritra!
Mamonjy ny androko ianao. Izay ilaiko rehetra - hanova 2 fotsiny OST raki-daza. Ny programa fotsiny no manao an'io. Misaotra betsaka!
Ity dia rindrambaiko iray lehibe. Nahasitrana tapaka iray izany OST rakitra voalohany ary avy eo nisokatra voalohany tao amin'ny Outlook 2019. Nanandrana 3 hafa aho
Ity dia rindrambaiko iray lehibe. Nahasitrana tapaka iray izany OST rakitra voalohany ary avy eo nisokatra voalohany tao amin'ny Outlook 2019. Nanandrana rindrambaiko fanarenana 3 hafa aho nefa tsy nahomby ary efa hanaiky ny mailaka taloha efa lost. Misaotra antontany DataNumen! 😊
ex CIO, efa misotro ronono izao
Jolay 15, 2019
Ny vokatrao dia nanao izay rehetra tokony hatao. Ny famerenana ny rakitra data-ko mailaka no nahavonjy ahy.
Hanoro ny vokatrao aho amin'izay mila izany
Hanolotra ny vokatrao amin'ny olona mila izany aho, ary azo antoka fa mila izany aho, apetrako indray.
Desambra 26, 2019
Taorian'ny fanoloana ny solo-saiko manokana dia mila miverina amin'ny fampiasana manokana ilay rakitra UST taloha aho mamadika azy ho PST. Anisan'ireo rindrambaiko marobe, manana aho
Taorian'ny fanoloana ny solo-saiko manokana dia mila miverina amin'ny fampiasana manokana ilay rakitra UST taloha aho mamadika azy ho PST. Anisan'ireo rindrambaiko marobe, hitako ny DEXR.EXE izay mifanaraka amin'ny tanjoko. Na dia tsotra be aza ny UI, DEXR dia afaka namerina ny mailaka rehetra, ny fifandraisana ary ny vondrona mpifandray tsy misy hadisoana. Tadidiko tsara foana DATANUMEN ho an'ny ho avy ho marika referansa fanarenana data.
Rehefa nandany ora 10 mahery ny fotoana niasana mba hanabeazana ny MS momba ny olana rehefa nanatsara ny Outlook 2010 hatramin'ny 2013 aho ary ny autogeneration an'ny
Rehefa nandany ora 10 mahery ny fotoana niasana mba hanabeazana ny MS momba ny olana rehefa nanatsara ny fomba fijeriko 2010 ka hatramin'ny 2013 aho ary ny fanavaozana ny fiarahan'ny roa tonta.ost rakitra natolotro ihany tamin'ny farany. rehefa nilaza tamiko izy ireo fa tsy afaka manokatra ny tena izy.ost rakitra. Azoko avy eo ny hevitra mamirapiratra hanaovana fikarohana haingana.ost ny .pst fiovam-po sy ny fipoahana - 3.8GB data izay tena sarobidy tamiko dia niverina teo am-pelatanako - izany rehetra izany taorian'ny nilazan'ny MS ny tohana ambony ho an'ny Outlook dia tsy afaka nanao n'inona n'inona. Izaho dia lavitra ny geek amin'ny solosaina fa rehefa fantatrao mihoatra noho ny mpanohana ny teknolojia dia tokony ho hitanao fa haingana fa sahirana ianao. Mety io...
RJ Collins Mpanorina V360
San Diego, CA, Etazonia
Enga anie 15th, 2015
Vahaolana amin'ny fanarahana ny lesoka mahazatra sy ny olana eo amin'ny fifanakalozana OST File
Ny Exchange dia ao amin'ny Mode Recovery
Ny lesoka dia mety ho hita tao anaty rakitra
Ny rakitra dia tsy rakitra fisie ivelany
Oversized OST Olana amin'ny rakitra
Fafao ireo zavatra fifanakalozam-bola avy amin'i Mistake
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Exchange Recovery v8.5
Tohano ny Exchange 5.0 hatramin'ny 2019.
Tohano ny Outlook 97 ka hatramin'ny 2019 ary ny Outlook for Office 365.
Support OST fisie noforonin'i Exchange ActiveSync.
Fanohanana ho an'ny Windows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 ary ny Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019. Samy manohana ireo rafitra miasa 32bit na 64bit.
Fanohanana hamerenana ireo mailaka, lahatahiry, posts, kalandrie, fanendrena, fangatahana fivoriana, fifandraisana, lisitra fizarana, asa, fangatahana asa, diary ary naoty ao OST raki-daza. Ny fananana rehetra, toy ny foto-kevitra, ka hatramin'ny, cc, bcc, daty sns.
Fanohanana hamerenana ireo zavatra natsofoka, toy ny hafatra hafa, Excel Worksheets, Word documents, sns.
Ireo entana sitrana dia voatahiry ary navadika ho rakitra fampirimana manokana (PST) izay azon'ny Microsoft Outlook idirana sy ny mpanjifa mail hafa mifanaraka aminy.
Fanohanana hamerenana ireo entana voafafa ao amin'ny boaty mailaka Exchange, ao anatin'izany ny hafatra mailaka, lahatahiry, posts, kalandrie, fanendrena, fangatahana fivoriana, fifandraisana, lisitra fizarana, asa, fangatahana asa, diary ary naoty.
Tohano hiova fo OST mankany amin'ny rakitra PST haingana sy mahomby.
Fanohanana hamerenana 2GB be loatra OST raki-daza.
Fanohanana mba ho sitrana OST fisie habe 16777216 TB (ie 17179869184 GB).
Fanohanana hamerenana ny fiarovana ny teny miafina OST antontan-taratasy, na enkripsi azo tsindriana na enkripsi avo (na ny encryption tsara indrindra) dia tohanana. ny OST Azo alaina indray ny rakitra na dia tsy manana ny teny miafinao aza ianao.
Fanohanana hamoronana rakitra PST raikitra amin'ny endrika Outlook 97-2002, endrika Outlook 2003-2019, ary endrika Outlook for Office 365.
Fanohanana mba ho sitrana OST manafatra data avy amin'ny rakitra VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) tsy simba na simba (*. vmdk), fisie Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (*. vhd), rakitra Acronis True Image (*. tib), Norton Ghost fisie (*. gho, * .v2i), fisie Windows NTBackup (*.bkf), Fisie sary ISO (*. Iso), rakitra sary Disk (*. Img), fisie sary CD / DVD (*. Bin), fisie alikaola 120% Mirror Disk File (MDF) (*. Mdf) ary fisie sary Nero (* .nrg).
Fanohanana hanamboarana sy hanovana OST fisie amin'ny media maloto, toy ny floppy disk, Zip kapila, CDROM, sns.
Fanohanana hanamboarana sy hanovana andiany iray OST raki-daza.
Tohano hahitana sy hisafidy ny OST rakitra tokony hamboarina amin'ny solo-sain'ny mpanjifa.
Fanohanana mba hamonjy ny rakitra PST sitrana amin'ny toerana rehetra, ao anatin'izany ny tambajotra mifamatotra izay eken'ny solosaina eo an-toerana.
Tohano ny fidirana amin'ny Windows Explorer, amin'izay ianao afaka manamboatra an OST manaova rakitra miaraka amin'ny menio misy ny Windows Explorer.
mampiasa DataNumen Exchange Recovery hiova fo OST mankany amin'ny PST Files
Jereo ny Video Tutorial (Dikan-teny feno)
Jereo ny Video Tutorial (Version Demo)
Rehefa miseho ny lozisialy ao amin'ny mpizara Microsoft Exchange, toy ny lozam-pifamoivoizana, ny kolikoly amin'ny base server sns, ny folder Exchange offline (.ost) ny rakitra ao amin'ny solo-sain'ny mpanjifa dia mbola misy ny hafatra mailaka sy ny zavatra hafa rehetra ao amin'ny kaonty mailakanao Exchange. Afaka mampiasa ianao DataNumen Exchange Recovery manova ny OST fisie mankany amin'ny fisie PST hahafahanao miditra ao amin'ny Microsoft Outlook ny angona ao anaty rakitra.
Ankoatr'izay, rehefa sendra lesoka sy olana isan-karazany ianao OST fisie, toy ny kolikoly tahirin-kevitra, lesoka fampifanarahana, famafana diso ireo mailaka, 2GB be loatra OST olan'ny rakitra sns, azonao ampiasaina foana DataNumen Exchange Recovery hamerenana angona avy amin'ny OST rakitra ary avadiho ho endrika PST izy ireo.
Fanamarihana: Alohan'ny hanovana ny OST rakitra amin'ny DataNumen Exchange Recovery, azafady manakatona ireo rindranasa hafa mety hiditra na hanova ny OST rakitra. Azafady, akatony Microsoft Outlook.
Fanteno ny OST rakitra hovaina:
Azonao atao ny mampiditra ny OST anaran'ny rakitra mivantana na kitiho ny bokotra hijerena sy hisafidianana ilay rakitra. Azonao atao koa ny manindry ny bokotra hahitana ny OST rakitra hivadika amin'ny solosaina eo an-toerana.
Raha fantatrao ny kinova Outlook an'ny loharano OST rakitra tokony hamboarina, avy eo azonao atao ny mamaritra azy ao anaty boaty combo eo akaikin'ny boaty fanovana rakitra loharano, ny endrika mety hiseho dia ny Outlook 97-2002, Outlook 2003-2010, ary Outlook 2013-2019 / Office 365. Raha avelanao ho "Auto Determined" ny format, dia DataNumen Exchange Recovery dia hanao scan ny loharano OST rakitra hamaritana ho azy ny endriny. Na izany aza, mila fotoana fanampiny izany.
DataNumen Exchange Recovery dia hitahiry ireo tahirin-kevitra voaova ho rakitra vaovao ao amin'ny endrika Outlook PST hahafahanao mampiasa Microsoft Outlook hanokatra sy hahita ireo zavatra novaina. Ary amin'ny toerana misy anao, ny anaran'ny fisie vaovao dia xxxx_recovered.pst, izay xxxx no anaran'ilay loharano OST rakitra. Ohatra, ho an'ny loharano OST rakitra Source.ost, ny fisie default niova fo dia Source_recovered.pst. Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Azonao atao ny mampiditra ny anaran'ny fisie niova fo mivantana na tsindrio ilay bokotra hijerena sy hisafidianana ilay rakitra niova fo.
Azonao atao ny misafidy ny endrika fisie ny rakitra PST niova fo ao amin'ny boaty combo eo akaikin'ny boaty fanovana rakitra novaina, ny endrika mety dia Outlook 97-2002 sy Outlook 2003-2019 / Office 365. Raha avelanao ho "Auto Determined" ny format, dia DataNumen Exchange Recovery hiteraka ny rakitra PST niova fo mifanaraka amin'ny Outlook napetraka ao amin'ny solosaina eo an-toerana.
Tsindrio ny bokotra, ary DataNumen Exchange Recovery starmiovaova avy amin'ny loharano OST ataovy ao anaty rakitra PST. Bara fandrosoana
dia hanondro ny fandrosoan'ny fiovam-po.
Aorian'ny fizotry ny fiovam-po, raha misy angona azo navadika soa aman-tsara, dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
Azonao atao izao ny manokatra ny rakitra PST niova fo amin'ny Microsoft Outlook ary mahita ireo zavatra niova fo. aza hadino fa DataNumen Exchange Recovery Hiezaka ny hametraka ireo zavatra niova fo tao amin'ny lahatahiry voalohany. Na izany aza, ho an'ny lost & zavatra hita, ho sitrana izy ireo ary hapetraka ao anaty folder manokana toa ny Recovered_Group1, Recovered_Group2, sns.
DataNumen Exchange Recovery 8.5 dia navoaka tamin'ny 28 Janoary 2021
Espaniôla, frantsay, alemana, italianina, portogey, rosiana, japoney, koreanina ary sinoa tsotra.
DataNumen Exchange Recovery 7.8 dia navoaka tamin'ny 10 Desambra 2020
Hamarino ny fanavaozana ny vokatra.
Auto manavao ny kinova farany.
DataNumen Exchange Recovery 7.6 dia navoaka tamin'ny 31 Oktobra 2020
DataNumen Exchange Recovery Navoaka tamin'ny 7.5 Aogositra 19 ny 2020
Hatsarao ny fifandraisan'ny mpampiasa.
Esory ireo entana tsy misy ilana azy.
DataNumen Exchange Recovery 7.2 dia navoaka tamin'ny 21 Jona 2020
Hatsarao ny fifanarahan'ny kinova 64bit.
DataNumen Exchange Recovery 7.1 dia navoaka tamin'ny 8 Febroary 2020
Hatsarao ny fahombiazan'ny fanarenana.
Ahenao ny fahatsiarovana ampiasaina amin'ny fizotran'ny fanarenana.
DataNumen Exchange Recovery 6.9 dia navoaka tamin'ny 3 Oktobra 2019
Hatsarao ny asan'ny fikarohana.
DataNumen Exchange Recovery Navoaka tamin'ny 6.8 Jolay 8 ny 2019
Esory ireo tsy fitoviana ao amin'ny fisie PST raikitra.
Mamolavola ny motera fanarenana batch.
Fanohanana mba hamonjy log log recovery.
DataNumen Exchange Recovery 6.5 dia navoaka tamin'ny 24 Janoary 2019
Tohano ny Server Exchange Exchange 2019 sy ny Outlook 2019.
Esory ny entana tsy misy ilana azy.
Hatsarao ny hafainganam-pandeha fanarenana.
DataNumen Exchange Recovery Navoaka tamin'ny 6.0 Novambra 12 ny 2018
Hatsarao ny fanarenana ireo rakitra be dia be.
Omeo fanaraha-maso misimisy kokoa momba ny kitapo fanarenana.
DataNumen Exchange Recovery Navoaka tamin'ny 5.6 septambra 21 ny 2018
DataNumen Exchange Recovery Navoaka tamin'ny 5.5 aprily 28 ny 2018
Tohano ny Server Exchange 2016, ny Outlook 2016 ary ny Office 365.
Hatsarao ny fahombiazan'ny kinova 64bit.
DataNumen Exchange Recovery Navoaka tamin'ny 5.0 Jolay 29 ny 2015
Tohano ny 64bit Outlook.
Tohano mba hamerenana ireo kapila angona tsy mety.
Fanohanana hifehezana raha ho sitrana ny voafafa, nafenina sa lost ary nahita zavatra.
Fanohanana hanarenana ny lesoka "Tsy afaka mamindra ireo entana" ao OST raki-daza.
DataNumen Exchange Recovery 4.5 dia navoaka tamin'ny 12 Jona 2014
Tohano hanarenana ny Outlook 2013 OST raki-daza.
DataNumen Exchange Recovery 4.0 dia navoaka tamin'ny 29 aprily 2014
Fanohanana mba ho sitrana OST rakitra rakitra avy amin'ny fisie VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) tsy simba na simba (* .vmdk), fisie Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (* .vhd), rakitra Acronis True Image (* .tib), Norton Ghost fisie (* .gho, * .v2i), fisie Windows NTBackup (*.bkf), Fisie sary ISO (* .iso), rakitra sary Diska (* .img), fisie sary CD / DVD (* .bin), fisie alikaola 120% Mirror Disk File (MDF) (* .mdf) ary fisie sary Nero (* .nrg).
DataNumen Exchange Recovery 3.5 dia navoaka tamin'ny 20 Janoary 2014
DataNumen Exchange Recovery 2.0 dia navoaka tamin'ny 29 Desambra 2008
Soraty indray ny fampiharana rehetra.
Tohano ny Microsoft Windows Vista.
Tohano ny Microsoft Outlook 2007 sy Exchange 2007.
Amboary ny bibikely amin'ny fikarakarana hafatra lehibe.
DataNumen Exchange Recovery 1.1 dia navoaka tamin'ny 10 Nov 2006
Hatsarao ny fahasitranan'ny fanarenana.
Tohano ny fomba fanarenana mandroso maromaro.
DataNumen Exchange Recovery 1.0 dia navoaka tamin'ny 1 Janoary 2006
Fitaovana mahery vaika hanarenana ny fitahirizana kamboty tsy misy kamboty na Microsoft Exchange (.ost) fisie
Sitrana lost Ny angon-drakitra Outlook, ao anatin'izany ny mailaka sy zavatra hafa avy amin'ny disks na kapila
Avereno ireo mailaka voafafa tamin'ny Outlook Express fisie dbx.
Avereno mailaka avy amin'ny mpanao kolikoly Outlook Express fisie dbx sy mbx.
Amboary sy avereno ny rakitra data Microsoft Outlook (.pst) simba.